किन बद्लिन्छ विवाहपछि दम्पतीको व्यवहार ? - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / किन बद्लिन्छ विवाहपछि दम्पतीको व्यवहार ?
वास्तविकता के हो भने विवाहपछि केही पनि परिवर्तन हुँदैन । न त श्रीमान् श्रीमतीको सोच, न व्यवहार न रहनसहन । बीचमा केही गरी कुनै परिवर्तन देखा पर्यो भने त्यसको जड हुने गर्छ–परिस्थिति । यस्तो परिवर्तन जीवनमा अचानक हुने गर्छ, जुन परिवर्तित परिस्थितिसँगै प्राकृतिक रूपले व्यक्तिको स्वभावको हिस्सा हुने गर्छ ।
–विवाह भइसकेपछि प्रेमको लक्ष्य पूरा भयो भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ, यो त एउटा विश्राम मात्र हो । जीवनसाथीका साथ पूरा यात्रा तय गर्न त बा“की नै हुन्छ तसर्थ परस्परमा खुसी बाँड्ने प्रयास जीवनभर जोड्नु हुँदैन ।
अनुहारको कालोपोतो कसरी हटाउने ? यि उपाय अपनाउनुहोस् सजिलै हट्छ